Home / समाचार / राती झाडीबाट आवाज आउँदा डराएर भागे सबै, बिहान हेर्दा ठूलो पछुतो
राती झाडीबाट आवाज आउँदा डराएर भागे सबै, बिहान हेर्दा ठूलो पछुतो 0
राती झाडीबाट आवाज आउँदा डराएर भागे सबै, बिहान हेर्दा ठूलो पछुतो राती ८ बजेको समयमा झडीबाट आवाज आएको सुनेपछि एक महिलाले डराएर गाउँलेहरुलाई बोलाइन् । बोलाएपछि गएका गाउँलेहरु आवाज सुनेर डराए । डरले सबैजना भागेर घरघरमा गए । बिहानपख फेरि झाडीमा गएर हेर्दा बल्ल वास्तविकता थाहा भएपछि सबैलाई ठूलो पहुतो भयो ।
बिहान झाडीमा हेर्दा गाउँलेहरुले त्यहाँ एक नवजात शिशु भेट्टाएका छन् । शिशु बिहानसम्म जीवीतै भए पनि अति नै गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको थियो । अघिल्लो दिन साँझ नै त्यहाँ हेरेको भए शिशुको ज्यान बच्न सक्ने भन्दै गाउँलेहरुले ठूलो पछुतो मानेका छन् ।
शिशुलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । भारतको इन्दौर झाबुआमा शिजो शनिबार बिहान शिशु भेटिएको हो । राती ८ बजे खेतमा पानी लगाउन गएकी मीरा मकवाना महिलाले आवाज सुनेकी थिइन् । उनले गाउँलेहरुलाई बोलाउँदा गाउँलेहरु नै डराएर भागेपछि उनी रातभरी सुत्न सकिनन् । उनले बिहानै आफ्ना पतिलाई यसबारे बताएर पतिलाई लिएर झाडीमा खोज्न गएकी थिइन् । बालक निकै गम्भीर हालतमा छ । मीराको छोरा बुहारीको कुनै सन्तान नभएकाले उनले यो बालकलाई नाती बनाएर पाल्ने इच्छा देखाएकी छिन् ।उनीहरुको यो कामलाई स्थानीयले स्वागत गरेका छन भने पापिनी आमा जसले जिवित बच्चालाई झाडिमा फाली उसको चारैतिर खोजी भैरहेको छ।
गगन थापा र प्रकाशमानसँग किन रुष्ट भए देउवा ? कारबाही गर्ने तयारीमा देउवा ? यस्तो छ भित्री तयारी